FJKM Ankadifotsy NY FANALAHIDIN'NY FANJAKAN'NY LANITRA / Katekomena / Fampianarana / Accueil - FJKM Ankadifotsy
NY FANALAHIDIN'NY FANJAKAN'NY LANITRA10/07/2017 16:00
Iraka nampanaovin’ny Tompo ireo mpianany tamimn’Izy nitsangana tamin’ny maty ny hoe:”Mandehana mitoria ny filazantsara amin’ny olombelona rehetra”.
Ho fankatoavan’izy roa ambiny folo lahy no niarahany nitsangana teo amin’ny kianjan’ny tempoly, notarihin’I Petera.
Ny Asa 2, 14 sns no ahitana ireo NIARA-NIJORO ho vavolombelon’ny Tompo. Ity no TORITENY VOALOHANY nataon’ny Apostoly. Ary hita ato ny vokatra fa nisy NIOVA FO tokony ho 3000 isa tao. I Petera ilay namely ny fanontanian’I Jesoa hoe:”Ataonareo ho Iza moa aho?” ka novaliany hoe:”Ianao no Kristy Zanak’Andriamanitra velona”, no nitenenany hoe:”Omeko anao ny fanalahidin’ny fanjakan’ny lanitra…”. Ampiasain’I Petera eto(Asa 2) io fanalahidin’ny lanitra io di any TORITENY.
Tsy maintsy ambara eto fa io Petera nomen’ny Tompo ny fanalahidin’ny fanjakan’ny lanitra io dia satria nanao ilay Fanekena an’I Jesoa ho Zanak’Andriamanitra velona izy. Io teny nataon’I Petera io no hataon’izay HIDITRA ho isan’ny fiangonan’I Jesoa Kristy. MANDRAY famelan-keloka (cp Isaia 59, 2; Rom 6, 1-6) amin’ny alalan’ny batisa izay miditra ho isan’ny fiangonan’I jesoa Kristy io;
Tsarovy fa na dia ireo mpianatr’I Jesoa aza dia niofana taminy nandritra ny telo taona. Isika tsy maintsy mianatra mba hahalalantsika Azy tsara, ka hahatongantsika ho IRAKA hitory ny filazantsara amin’ny hafa.